Inqubomgomo Yobumfihlo ye-FXCC | Indlela esisebenzisa ngayo ulwazi esingayilanda
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-FXCC
I-2. INQUBOMGOMO YOMTHETHO WOKUPHILA
I-3. UKUKHONZWA KWENKCAZELO YOMUNTU
I-4. UKUSEBENZISA UKUTHI WENZWE NGOKWENZA YAKHO
I-1. Ukusebenza kwesivumelwano
I-2. Ukuhambisana nesibopho somthetho
I-3. Ngenhloso yokulondoloza izithakazelo ezifanele
I-4. Ngezinhloso zangaphakathi zebhizinisi nokugcinwa kwerekhodi
I-5. Izaziso zomthetho
I-6. Ngezimiso Zokukhangisa
I-7. Ukusisiza ekuthuthukiseni imikhiqizo namasevisi ethu
I-5. UKUQALA KWENKCAZELO YAKHO
I-6. KUSETSHENZISWA KWEZIMINININGWANE ZESICELO
I-7. INDLELA ESIKHULU NGOKWENZEKA NGAYO IMINININGWANE YAKHO
I-8. AMALUNGELO WAKHO NGOKWENZA ULWAZI LWAKHO
I-9. AKUKHO KUNYE OKUFANELE KUNYE
I-10. ISIKHATHI SESIKHATHI SOKUPHUMA
I-11. INDLELA ESIKHUSELELA NGAYO ULWAZI WAKHO
I-12. INQUBOMGOMO YETHU
Central Clearing Ltd (ngemuva kwalokhu "iNkampani" noma "thina" noma "FXCC" noma "us"). Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza indlela i-FXCC eqoqa ngayo isebenzise futhi ilawula ulwazi lomuntu siqu kusuka kumakhasimende ayo asebenzayo namakhasimende angenzeka. U-FXCC uzibophezele ekulondolozeni ubumfihlo bakho. Ngokuvula i-akhawunti yokuhweba nge-FXCC iklayenti inika imvume yokuqoqwa, ukucubungula, ukugcinwa nokusetshenziswa kolwazi lomuntu siqu nge-FXCC njengoba kuchaziwe ngezansi.
Yinkambiso yeNkampani yokuhlonipha imfihlo yolwazi kanye nobumfihlo ngabanye.
Le Inqubomgomo Yobumfihlo ihlose ukukunikeza ulwazi ngendlela esiqoqa ngayo futhi sisebenzisela idatha yakho yomuntu siqu, kufaka phakathi noma iyiphi idatha ongayinikeza ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu uma ubhalisela iwebhusayithi yethu.
Kubalulekile ukuthi ufunde le Nqubomgomo Yobumfihlo kanye nanoma yimuphi omunye isaziso sobumfihlo noma isaziso sokucubungula kahle esingase sinikeze ngezikhathi ezithile lapho siqoqa noma sicubungula imininingwane yomuntu mayelana nawe ukuze wazi kahle ukuthi kungani sisebenzisa idatha yakho nokuthi kungani . Le Nqubomgomo ihlanganisa ezinye izinqubomgomo futhi ayihloselwe ukuyiqeda.
Ku-FXCC siyaqonda ukubaluleka kokugcina imfihlo kolwazi lomuntu siqu lomthengi futhi sizibophezele ekuqinisekiseni ukuphepha kwanoma yiluphi ulwazi olunikezwa amakhasimende ethu ngokusebenzisa le website.
2. INQUBOMGOMO YOMTHETHO WOKUPHILA
Ama-FXCC Isitatimende Senqubomgomo Yobumfihlo sizobuyekezwa ngezikhathi ezithile ukuze kuthathwe i-akhawunti yemithetho emisha nobuchwepheshe, izinguquko emisebenzini yethu kanye nemikhuba futhi ukuqinisekisa ukuthi ihlala ihambisana nemvelo eguqukayo. Noma yiluphi ulwazi esilubambe luzolawulwa Isitatimende Senqubomgomo Yobumfihlo Yamanje. Inqubomgomo Yobumfihlo ebuyekezwe izolayishwa kwiwebhusayithi ye-FXCC. Ngalokhu, amaklayenti avuma ukwamukela ukuthunyelwa kweNqubomgomo Yobumfihlo ebuyekezwayo nge-elekthronikhi kuwebhusayithi njengesaziso sangempela se-FXCC kumakhasimende ayo. Uma ngabe yiziphi izinguquko ezenziwe ezithinta izinto ezibonakalayo, sizobe sikukwazise nge-imeyili noma ngesaziso ekhasini lasekhaya. Noma yikuphi ukuphikisana mayelana nenqubomgomo Yobumfihlo ye-FXCC kuncike kule saziso nesivumelwano seKlayenti. I-FXCC ikhuthaza amaklayenti ayo ukuba abuyekeze njalo le Nqubomgomo Yobumfihlo ukuze bahlale beqaphela ukuthi yiluphi ulwazi oluqoqiwe iFXCC, ukuthi luyisebenzisa kanjani nokuthi lungabonakalisa bani, ngokuhambisana nezinhlinzeko zale Nqubomgomo.
3. UKUKHONZWA KWENKCAZELO YOMUNTU
Ukuze unikeze imikhiqizo namasevisi wezimali kumaklayenti ethu ngendlela efanele futhi ngokunembile, uma ufaka isicelo sokubhalisa ukusebenzisa insizakalo eyodwa noma ngaphezulu sizokucela ulwazi lomuntu siqu. I-FXCC inamalungelo kanye nomsebenzi ngenxa yomsebenzi webhizinisi owenziwe, ukuhlola ngokunemba kwedatha egcinwe kubalwazi ngokufaka ngezikhathi ezithile idatha ebuyekeziwe enikeziwe noma ukuqinisekiswa kokunemba kwalokhu okushiwo ngenhla.
Uhlobo lwolwazi lomuntu siqu esingaluqoqa lungabandakanya (kodwa alukhawulelwe):
Igama eliphelele lekhasimende.
Amakheli asekhaya nasemsebenzini.
Ikhaya futhi usebenze izinombolo zocingo.
Inombolo yeselula / yocingo.
Inombolo yepasipoti / noma inombolo ye-ID.
I-ID yesithombe ekhishwe nguhulumeni ngesignesha.
Ulwazi mayelana nesimo somsebenzi kanye nenzuzo
Ulwazi mayelana nesipiliyoni sangaphambili sokuhweba nokubekezelelana kwezinselele.
Ulwazi mayelana nemfundo nokuqeqeshwa
Inombolo Yobunikazi Bentela Nenombolo Yentela.
Idatha Yezezimali ihlanganisa [i-akhawunti yasebhange kanye nemininingwane yekhadi lokukhokha].
Idatha yokuThengiswa ihlanganisa [imininingwane mayelana nokukhokha kuya nakuwe].
Idatha yobuchwepheshe ifaka ikheli le-intanethi ye-intanethi (i-IP protocol), idatha yakho yokungena, uhlobo lwesiphequluli kanye nenhlobo, ukulungiselelwa kwendawo yendawo kanye nendawo, izinhlobo ze-plug-in yesiphequluli nezinhlobo, isistimu yokusebenza kanye nesikhulumi nokunye ubuchwepheshe kumadivayisi oyisebenzisayo ukufinyelela le website ].
Idatha yephrofayela ihlanganisa [igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi, ukuthenga noma ama-oda awenziwe nguwe, izintshisekelo zakho, izintandokazi, impendulo kanye nezimpendulo zocwaningo].
Idatha yokusetshenziswa ihlanganisa [ulwazi mayelana nokuthi usebenzisa kanjani iwebhusayithi yethu, imikhiqizo namasevisi].
Idatha Yokumaketha Nezokuxhumana ihlanganisa [okuthandwa nguwe ekutholeni ukumaketha kithi nakwabanye abasesithathu kanye nezintandokazi zakho zokuxhumana].
Siphinde siqoqe, sisebenzise futhi sabelane ngemininingwane ehlanganiswe njengezibalo noma idatha yabantu ngenoma iyiphi inhloso. Idatha ehlanganisiwe ingase itholakale kudatha yakho yomuntu siqu kodwa ingabhekwa njengedatha yomuntu ngokomthetho njengoba le datha engabonakali ngokuqondile noma ngokungaqondile ubunikazi bakho. Isibonelo, singahlanganisa idatha yakho yokusebenzisa ukubala iphesenti yabasebenzisi abafinyelela isici esithize sewebhu. Kodwa-ke, uma sihlanganisa noma sixhuma Idatha ehlanganisiwe nedatha yakho yomuntu ukuze sikwazi ukukukhomba ngqo noma ngokungaqondile, sidlulise idatha ehlanganisiwe njengedatha yomuntu siqu okuzosetshenziswa ngokuhambisana nalesi saziso sobumfihlo.
Asiqoqa noma yiziphi izinkomba ezikhethekile zeDatha Idatha ngawe (lokhu kufaka imininingwane mayelana nohlanga lwakho noma ubuhlanga, izinkolelo zenkolo noma zefilosofi, ukuphila kocansi, ukuziphatha ngokocansi, imibono yezombangazwe, ubulungu bezinyunyana, ulwazi mayelana nempilo yakho kanye ne-genetic nedatha ye-biometric) .
Singase futhi sibuthe ulwazi oluthile mayelana nokusebenzisa kwakho amasevisi wethu. Lokhu kungafaka ulwazi ovela kuzo wena kanye / noma inkampani yakho njengezikhathi ozibhekayo, ukusetshenziswa kwakho kwezinsizakalo, izinhlobo zedatha, izinhlelo kanye nemibiko oyifinyelelayo, izindawo ozingena kuwo, ubude beseshini kanye neminye imininingwane efanayo. Ulwazi oluqoqiwe lungatholakala futhi ngokusemthethweni kubantu abathintekayo, njengeziphathimandla zomphakathi, izinkampani ezikunikeze ku-FXCC, izinkampani zokucubungula ikhadi, kanye nemithombo etholakale esidlangalaleni esivunyelwe ngokomthetho ukuba siyisebenze.
Ukukhulumisana kwakho nge-elekthronikhi kanye / noma kwefoni kubhaliwe futhi kuyindawo kuphela ye-FXCC futhi kubonisa ubufakazi bokuxhumana phakathi kwethu.
Unelungelo lokunikeza noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu oludingekayo. Noma kunjalo, ulwazi olulahlekile lungenza ukuthi singakwazi ukuvula noma ukugcina i-akhawunti yakho kanye / noma ukukunikeza ngezinsizakalo zethu
4. UKUSEBENZISA UKUTHI WENZWE NGOKWENZA YAKHO
Siqoqa inqubo futhi siphatha ulwazi oluvumela ukuba senze izibopho zethu zesikontani nawe futhi sihambisane nezibopho zethu zomthetho.
Ngezansi izinhloso ulwazi lwakho lomuntu olucutshungulwa ngalo:
Sisebenzisa idatha yakho ukuze sikunikeze ngezinsizakalo zethu nemikhiqizo, futhi sikwazi ukuqedela inqubo yethu yokwamukela ukuze singene ebuhlotsheni besivumelwano namaklayenti ethu. Ukuze sigcwalise iklayenti lethu ekubhaliseni sidinga ukuqinisekisa ukuthi ungubani, senze ngokuzikhandla kwamakhasimende ngokuvumelana nezibopho zokulawula, futhi kudingeka sisebenzise imininingwane etholakalayo ukuphatha ngempumelelo i-akhawunti yakho yokuhweba ne-FXCC.
2. Ukuhambisana nesibopho somthetho
Izibopho eziningana zomthetho ezibekwe yizinqubo ezifanele esiziphathelayo, kanye nezidingo zomthetho, isib. Imithetho yokulwa nokulwa nemali, imithetho yezinsizakalo zezimali, imithetho yezinkampani, imithetho yobumfihlo nemithetho yentela. Ngaphezu kwalokho, kuneziphathimandla ezihlukahlukene zokuphatha ezifaka imithetho yethu kanye nemithethonqubo kithi, okubeka imisebenzi edingekayo yokucubungula idatha yokuhlolwa kwamakhadi esikweletu, ukukhokha inkokhelo, ukuqinisekiswa kobunikazi nokuhambisana nemithetho yenkantolo.
3. Ngenhloso yokulondoloza izithakazelo ezifanele
I-FXCC ihlela idatha yomuntu siqu ukuze igcine izithakazelo ezisemthethweni eziqhutshwa thina noma umuntu wesithathu, lapho isithakazelo esisemthethweni silapho sinezizathu zebhizinisi noma zezohwebo zokusebenzisa ulwazi lwakho. Noma kunjalo, akumele uhambe ngokungafanele kuwe futhi yini engcono kuwe. Izibonelo zemisebenzi yokucubungula ihlanganisa:
Ukuqalisa izinkantolo futhi silungiselele ukuzivikela kwethu ngezinqubo zokwahlulela;
izindlela kanye nezinqubo esizenzayo ukuhlinzekela ukuphepha kwe-IT kanye nenqubo yeNkampani, ukuvimbela ubugebengu obukhona, ukuphepha kwefa, ukulawulwa kwempahla kanye nezinyathelo zokulwa neziphambeko;
izinyathelo zokuphatha ibhizinisi kanye nokuthuthukiswa kwemikhiqizo namasevisi;
4. Ngezinhloso zangaphakathi zebhizinisi nokugcinwa kwerekhodi
Kungadingeka ukucubungula idatha yakho yangasese yezinhloso zangaphakathi zebhizinisi kanye nokugcinwa kwerekhodi, okusemthethweni wethu siqu futhi kuyadingeka ukuze sihambisane nezibopho zethu zomthetho. Sizogcina futhi amarekhodi ukuze siqinisekise ukuthi uhambisane nezibopho zakho zesivumelwano ngokulandela isivumelwano esilawula ubuhlobo bethu nawe.
Ngezinye izikhathi, umthetho udinga ukuba sikululekele izinguquko ezithile kumikhiqizo kanye / noma amasevisi noma imithetho. Kungadingeka sikutshele mayelana nezinguquko ezihlobene nemikhiqizo namasevisi wethu, ngakho-ke sizophoqeleka ukucubungula ulwazi lwakho lomuntu siqu ukukuthumela izaziso zomthetho. Uzoqhubeka nokuthola lolu lwazi ngisho noma ukhetha ukungatholi ulwazi lokuthengisa ngqo kusuka kithi.
6. Ngezimiso Zokukhangisa
Singasebenzisa idatha yakho ngezinhloso zokucwaninga nokuhlaziywa, nomlando wakho wokuhweba ukuze unikeze noma yikuphi ukuhlaziywa, imibiko, imikhankaso engase ikuthande ekhelini lakho le-imeyili elibhalisiwe. Sicela uqaphele ukuthi uhlale unelungelo lokushintsha inketho yakho uma ungafisi ukuthola lezo zinkampani.
Uma ungafuni ukuthi sisebenzise ulwazi lwakho lomuntu siqu ngale ndlela, sicela uthumele i-imeyili ku-support@fxcc.com ecela ukuthi ungaxhunywanga nganoma iyiphi injongo yokumaketha. Uma ngabe ubhalisile on-line, ungangena ngemvume kuwe Iphrofayela yomsebenzisi we-Trader Hub futhi ulungise iziphakamiso zakho zesaziso kunoma yisiphi isikhathi.
7. Ukusisiza ekuthuthukiseni imikhiqizo namasevisi ethu
Singasebenzisa ulwazi lomuntu siqu olunikezwe nguwe ukuqinisekisa izindinganiso eziphakeme uma unikeza imikhiqizo namasevisi wethu.
5. UKUQALA KWENKCAZELO YAKHO
Inhloso eyinhloko esisebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ukusivumela ukuthi siqonde izinhloso zakho zezezimali futhi uqinisekise ukuthi amasevisi afanelekile afanele kuphrofayela yakho. Ngaphezu kwalokho, lolu lwazi lusiza i-FXCC ukuhlinzeka ngamasevisi wekhwalithi. Ngesikhathi singakuthumela impahla yokuthengisa (kufaka phakathi kodwa engagcini ukuxhumana kwe-SMS noma ye-imeyili ukuthi uyibuke, amakholi we-margin, noma olunye ulwazi) ngezikhathi ezithile esicabanga ukuthi kuzokusiza kuwe, siyazi isidingo sokuhlonipha ubumfihlo bakho. Ngaphandle kokuthi unolwazi oluthile, ulwazi lomuntu siqu esilubambe lisetshenziselwa ukusungula nokuphatha i-akhawunti yakho, ukubuyekeza izidingo zakho eziqhubekayo, ukwandisa insizakalo yamakhasimende kanye nemikhiqizo futhi ikunike ulwazi oluqhubekayo noma amathuba esikholelwa ukuthi angakufaneleka.
I-FXCC ngeke idalulwe ulwazi lwakho lomuntu siqu ngaphandle kwemvume yakho yangaphambi kwalokho, kuye ngokuthi umkhiqizo noma isevisi ethintekayo nemingcele ethize kolwazi olubucayi, lokhu kusho ukuthi ulwazi lomuntu siqu lungadalulwa ku:
Abahlinzeki bezinsizakalo kanye nabacebisi bezengcweti ku-FXCC abanikezwe inkontileka ukuze basinikeze ukuphatha, ezezimali, umshuwalense, ucwaningo noma amanye amasevisi.
Ukwethulwa kwabathengi noma abalingani esinobudlelwane nabo (noma yikuphi okungenzeka kube ngaphakathi noma ngaphandle kwe-European Economic Area)
Abahlinzeki ngezikweletu, izinkantolo, izinkantolo kanye neziphathimandla zokulawula njengoba kuvunyelwe noma kugunyaziwe ngumthetho
Ukubika ngesikweletu noma i-ejenti yokubhekisela, abahlinzeki benkonzo yesithathu yokuqinisekisa, ukuvimbela ukukhwabanisa, izinhloso zokulwa nokukhishwa kwemali, ukuhlonza noma ukuhlolwa okukhishwayo kwamakhasimende
Noma ubani ogunyaziwe ngumuntu, njengoba kuchazwe lowo muntu noma inkontileka
Kumxhumanisi weNkampani noma yimuphi omunye inkampani eqenjini elifanayo leNkampani.
Uma kwenzeka ukudalulwa okudingekayo kwenziwe ngomthetho noma kunoma yiliphi igunya elilawulayo, kuzokwenziwa ukuze i-FXCC ihambisane nanoma yiziphi izibopho zomthetho, zizivikele ekukhwabaneni okungenzeka, futhi zigcine izivumelwano zomhlinzeki wesevisi. Uma kwenzeka ukudalulwa okunjalo kuyadingeka kuzokwenziwa 'ngesidingo sokwazi', ngaphandle uma kungenjalo kufundiswe igunya lokulawula. Ngokuvamile, sidinga ukuthi izinhlangano zingekho ngaphansi kwe-FXCC ezithatha noma zithole ulwazi lomuntu siqu njengabahlinzeki bezinsizakalo ku-FXCC bamukela ukuyimfihlo kwalolu lwazi, zenze inhlonipho ilungelo lomuntu ngamunye lokuzimela futhi lihambisane nezimiso zokuvikela idatha kanye nale nqubomgomo.
Kwezinye izimo, singadlulisela ulwazi kubantu besithathu uma kudingeka ngokomthetho ukwenza kanjalo noma uma sigunyaziwe ngaphansi kwezibopho zethu zezivumelwano nezivumelwano noma uma sinikezwe imvume yakho.
Singase futhi sitshele imininingwane yakho kubantu besithathu uma singaphansi komsebenzi wokudalula noma ukwabelana ngemininingwane yakho ukuze uhambisane nanoma yisiphi isibopho esingokomthetho, noma ukuphoqelela noma ukusebenzisa izimiso nezimo zeSayithi.
6. KUSETSHENZISWA KWEZIMINININGWANE ZESICELO
Ngokuthumela imininingwane yakho, uvumela ukusetshenziswa kwe-FXCC yalowo lwazi, njengoba kuvezwe kule nqubomgomo. Ngokufinyelela nokusebenzisa lokhu uyavuma ukuthi ufunde, uqonde futhi uvumelana nale nqubomgomo yobumfihlo. Sigcina ilungelo lokushintsha inqubomgomo yethu yobumfihlo ngezikhathi ezithile futhi sizobuyekeza leli khasi ngokufanele. Sicela ubuyekeze inqubomgomo yethu njalo ngangokunokwenzeka - ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kweSayithi kuzokubonisa ukuthi uyavumelana nanoma yiziphi izinguquko.
I-Site kungenzeka, ngezikhathi ezithile, iqukethe izixhumanisi ezivela nakwamanye amawebhusayithi amanethiwekhi ethu nabalingani. Uma ulandela isixhumanisi kunoma yiliphi lawa mawebhusayithi, sicela uqaphele ukuthi lawa mawebhusayithi angaba nezinqubomgomo zawo zobumfihlo nokuthi asimukeli noma yimuphi umthwalo noma umthwalo walezi zinqubomgomo. Sicela uhlole lezi zinqubomgomo ngaphambi kokuthi uthumele noma yimaphi imininingwane yomuntu kulawa mawebhusayithi.
Ungakwazi ukuhoxisa imvume yakho nganoma isiphi isikhathi, noma ngabe ukucubungula kwedatha yomuntu siqu ngaphambi kokuthola ukukhishwa kwakho ngeke kuthinteke.
7. INDLELA ESIKHULU NGOKWENZEKA NGAYO IMINININGWANE YAKHO
I-FXCC izogcina idatha yakho yomuntu siqu uma nje siba nobuhlobo bebhizinisi nawe isikhathi eside.
8. AMALUNGELO WAKHO NGOKWENZA ULWAZI LWAKHO
Ngokomthetho kudingeka siphendule kunoma yiziphi izicelo zomuntu siqu phakathi nezinsuku ze-30, ngaphandle uma uhlobo lwesicelo ludinga isikhathi esengeziwe sokuphenya nokuhlola. Amalungelo angase atholakale kuwe maqondana nolwazi lomuntu siqu esilubambe ngawe oluchazwe ngezansi:
Thola ukufinyelela kwedatha yakho yomuntu siqu. Lokhu kukuvumela ukuba uthole ikhophi yedatha yomuntu siqu esiyibambe ngawe.
Cela ukulungiswa / ukulungiswa kwedatha yomuntu siqu esikubambe ngawe. Lokhu kukusiza ukuba ulungise noma iyiphi idatha engaphelele noma engalungile esiyibambe ngawe. Singacela ulwazi olwengeziwe namadokhumenti adingekayo ukuqinisekisa ukudingwa kwenguquko eceliwe yedatha.
Isicelo sokuphumula kolwazi lwakho lomuntu siqu. Ungasicela ukuba sisule idatha yakho yomuntu siqu, sisebenzise ilungelo lakho "lokukhohlwa", lapho kungekho isizathu esihle sokuthi siqhubeke siyiqedile. Lesi sicelo sokususa idatha yakho siqu sizoholela ekuvaleni i-akhawunti yakho nokuqedwa kobudlelwane beklayenti.
Isicelo sokuthi 'uvimbele' noma ukucindezela ukucubungula kwedatha yakho siqu ezimweni ezithile, njengokuthi uphikisana nokuchithwa kwalolu lwazi lomuntu siqu noma into oyithandayo. Ngeke kusivimbe ekugcineni imininingwane yakho. Sizokukwazisa ngaphambi kokuba sinqume ukungavumelani nanoma imuphi umkhawulo oceliwe. Uma sitshele abanye imininingwane yakho, sizokwazisa mayelana nomkhawulo uma kunokwenzeka. Uma usibuza, uma kungenzeka futhi evunyelwe ukwenza kanjalo, sizokutshela nokuthi ubani owabelane ngolwazi lwakho lomuntu siqu ukuze ukwazi ukuxhumana nabo ngokuqondile.
Unelungelo lokuphikisana nedatha yakho yomuntu ngokucubungulwa ngezinjongo zokuthengisa ngqo. Lokhu kufaka phakathi ukuprofetha okuningi njengoba kuhlobene nokukhangisa okuqondile. Uma wenqaba ukucubungula ngezinjongo zokuthengisa ngqo, khona-ke sizoyeka ukucubungula idatha yakho yomuntu ngezinhloso ezinjalo.
Into, nganoma isiphi isikhathi, kunoma yiziphi izinqumo esingazithatha ezisekelwe ngokucubungula okuzenzakalelayo (kufaka phakathi ukuprofetha). Ukufakela phambili kuhilela ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusisiza ukuba senze izinqumo ngokuzenzekelayo, ngokusekelwe kwidatha yakho siqu esiyiqoqa evela kuwe noma kubantu besithathu.
9. AKUKHO KUNYE OKUFANELE KUNYE
Ngeke udingeke ukhokhe imali ukuze ufinyelele idatha yakho yomuntu siqu (noma ukusebenzisa noma yiliphi elinye amalungelo). Noma kunjalo, singakhokhisa imali edingekayo uma isicelo sakho singenasisekelo, siphindaphinda noma siphumelele. Ngaphandle kwalokho, singanqaba ukuhambisana nesicelo sakho kulezi zimo.
10. ISIKHATHI SESIKHATHI SOKUPHUMA
Sizama ukusabela kuzo zonke izicelo ezisemthethweni kungakapheli inyanga eyodwa. Ngezinye izikhathi kungasithatha isikhathi esingaphezu kwenyanga uma isicelo sakho sinzima kakhulu noma wenze izicelo eziningi. Kulokhu, sizokwazisa futhi sikugcine uvuselelwe.
11. INDLELA ESIKHUSELELA NGAYO ULWAZI WAKHO
Sizama ukuqinisekisa ukuvikelwa kolwazi olunikezwe kithi, kokubili ngesikhathi sokudlulisa futhi uma sithola. Sigcina izivikelo ezifanele zokuphatha, ezobuchwepheshe nezomzimba ukuvikela idatha yomuntu siqu ngokubhujiswa ngengozi noma okungekho emthethweni, ukulahlekelwa ngengozi, ukuguqulwa okungagunyaziwe, ukudalulwa okungagunyaziwe noma ukufinyelela, ukusetshenziswa kabi, nanoma iyiphi enye indlela engekho emthethweni yokucubungula imininingwane yomuntu siqu. Lokhu kuhlanganisa, isibonelo, izibhamu, ukuvikelwa kwephasiwedi kanye nokunye ukutholakala nokulawulwa kokugunyazwa.
Noma kunjalo, ayikho indlela yokudlulisela phezu kwe-inthanethi, noma indlela yokugcina i-electronic, i-100% ephephile. Asikwazi ukuqinisekisa noma ukuqinisekisa ukuphepha kwanoma yiluphi ulwazi olusithumela kithi futhi wenza kanjalo ngengozi yakho. Futhi asikwazi ukuqinisekisa ukuthi ulwazi olunjalo lungatholakali, ludalulwe, luguquliwe, noma lubhujiswe ngokuphula noma yiziphi izivikelo zethu zomzimba, ezobuchwepheshe noma zokuphatha. Uma ukholwa ukuthi Idatha yakho Yomuntu ihlehlisiwe, sicela uxhumane nathi.
I-FXCC ingagcina imininingwane yakho kumininingwane yayo yokubheka ukuze iphendule imibuzo noma ixazulule izinkinga, inikeze ngezinsizakalo ezithuthukisiwe nezintsha nokuhlangabezana nanoma yiziphi izimfuneko zokugcinwa kwedatha zomthetho. Lokhu kusho ukuthi singalondoloza imininingwane yakho ngemuva kokuyeka ukusebenzisa iSayithi noma izinsizakalo zethu noma ukuxhumana nabanye nathi.
12. INQUBOMGOMO YETHU
Amakhukhi ayingxenye encane yombhalo egcinwe kwikhompyutha yakho ukusisiza ukuthi sithole uhlobo lwesiphequluli nezilungiselelo ozisebenzisayo, lapho usuwebhusayithi, lapho ubuyela kuwebhusayithi, lapho uvela khona, futhi ukuqinisekisa ukuthi ulwazi lwakho evikelekile. Inhloso yalolu lwazi ukukunikeza okuhlangenwe nakho okufanele futhi okuphumelelayo kusayithi le-FXCC, kufaka phakathi ukwethula amakhasi wewebhu ngokuvumelana nezidingo zakho noma izintandokazi zakho.
I-FXCC ingasebenzisa nabahlinzeki bezinsizakalo zangaphandle abazimele ukulandelela ithrafikhi nokusetshenziswa kuwebhusayithi. Amakhukhi asetshenziswa njalo kumawebhusayithi amaningi e-intanethi futhi ungakhetha ukuthi ikhukhi iyakwamukelwa kanjani nokuthi iyakwamukela kanjani ngokushintsha izinguquko zakho nezinketho kusiphequluli sakho. Ngeke ukwazi ukufinyelela izingxenye ezithile ze www.fxcc.com uma ukhetha ukukhubaza ukwamukela kwekhukhi kusiphequluli sakho, ikakhulukazi izingxenye ezivikelekile zewebhusayithi. Ngakho-ke sincoma ukuthi unike amandla ukwamukelwa kwekhukhi ukuze uzuze kuzo zonke izinsiza kwiwebhusayithi.
Unelungelo lokunquma ukuthi wamukele noma unqabe amakhukhi ngokuhlela noma ukulungisa izilawuli zakho zesiphequluli sewebhu ukuze wamukele noma unqabe amakhukhi. Uma ukhetha ukwenqaba amakhukhi, ungase usasebenzise iwebhusayithi yethu kodwa ukufinyelela kwakho kwezinye izinto kanye nezindawo zewebhu yethu kungavinjelwa. Njengendlela ongayenqaba ngayo amakhukhi ngokusebenzisa izilawuli zesiphequluli sakho sewebhu ishintsha kusuka kusiphequluli-kuya kusiphequluli, kufanele uvakashele imenyu yokusiza isiphequluli sakho ukuze uthole olunye ulwazi.
Uma uqhubeka ukusebenzisa lewebhusayithi ngaphandle kokushintsha izilungiselelo ze-cookie zesiphequluli sakho sewebhu bese uvumela inqubomgomo yethu ye-cookie
Ukuze ufunde kabanzi mayelana namakhukhi nokuthi ungawaphatha kanjani ngesiphequluli sakho / idivayisi sicela uvakashele www.aboutcookies.org
Uma ungathanda ukuxhumana nathi nganoma yimiphi imibuzo noma amazwana aphathelene nenqubomgomo yethu yobumfihlo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi nge-e-mail, ikheli leposi, ifoni nefeksi noma usebenzise isikhungo sethu sokuxoxa ku-IM ummeleli wenkonzo yamakhasimende.
I-Tel: + 44 203 150 0832